“Hanitr’i Eva”: poeta 5 vavy hamelona ny antsa - ewa.mg
“Hanitr’i Eva”: poeta 5 vavy hamelona ny antsa
News - “Hanitr’i Eva”: poeta 5 vavy hamelona ny antsa
Andriambavilanitra 5, poetan’ny
ankehitriny no hitondra ny “Hanitr’i Eva” etsy amin’ny sekoly
Cendrillon Soavimasoandro, ny alahady 1 novambra, manomboka amin’ny
1 ora tolakandro. Hitondra ny fijeriny mahakasika an’i Eva izy ireo
amin’io fotoana io. “ Tsy i Eva ilay namadika an’i Adama akory ny
vehivavy… Manana ny hanitra ho azy ihany koa i Eva, ary
havoitranay ao anatin’ny sanganasa izany”, hoy i Tsiaro ny Fitia.
Lohahevitra maro no holalaovina amin’io andro io. Fitiavana
misandrahaka amin’ny alahelo, ny ranomaso, ny tsiky, ny
fahafatesana. Hovelomin-dry Tsiaro, Miritsoka, Antso fy Tia,
Natiora ary i Larissa Ramanitriniaina izany. Eo koa ny
fanentanana sy ny fandravahana ny seho amin’ny alalan’ny dihy,
iarahana amin-dRabefitia. Raha ny 26 marsa 2020 teo no
saika hanaovana ny seho “Hanitr’i Eva”… Nihantona izany noho ny
hamehana ara-pahasalamana sy ny fihibohana vokatry ny fidiran’ny
valanaretina teto ary izao hotanterahina izao amin’izany.
L’article “Hanitr’i Eva”: poeta 5 vavy hamelona ny antsa a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 29/10/2020
«caisse école»: niakatra ho 50 miliara Ar ny sorabola
Hizara telo ny « caisse école » hotsinjaraina eny amin’ny sekolim-panjakana manerana ny Nosy, araka ny fanazavan’ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena, i Sahondrarimalala Marie Michèle. Efa lasa any amin’ny banky ny andiany voalohany sy ny faharoa ka anjaran’ireto farany ny mitsinjara izany eny amin’ny Dren isanisany. Natao hampihodinana ny asa fampianarana eny an-dakilasy ny sora-bola roa voalaza. Amin’ny andiany fahatelo ny fiandohan’ny taona 2021 vao hisitraka ny fanampiana vola ireo mpampianatra Fram rehetra na ireo efa mahazo karama avy amin’ny fanjakana na ireo mbola miandry izany. Any ambanivohitra, vokatra ny solon’ny fandraisana anjaran’ny ray aman-dreny amin’ny karaman’ny mpampianatra.Nampakarina ny sora-bola natokana ho an’ny “caisse école” amin’ity taom-pianarana ity ka lasa 50 miliara Ar hisahana ny fanabeazana maimaimpoana ho an’ny mpianatra rehetra. Handray mpampianatra ho mpiasam-panjakana miisa 7 700 koa ny fanjakana ka misy amin’izy ireo ny alaina avy amin’ireo nivoaka tamin’ny toeram-panofanana ho mpampianatra. Hojerena koa ireo nametraka fitarainana fa tsy voaray nefa nahafeno ny fepetra rehetra.Vonjy A. L’article «caisse école»: niakatra ho 50 miliara Ar ny sorabola a été récupéré chez Newsmada.
Roa lahy nidoboka eny Tsiafahy. Anisan’izany ilay voalaza fa polisy voaroaka, tsy am-perinasa intsony, sy ny namany. Manampy ireo, naiditra am-ponja eny Antanimora ny vehivavy iray vao tera-bao. Momba ilay “Raharaha fandrobana volabe 36 tapitrisa Ar”, teny Anosipatrana no nahavoarohirohy azy ireo.Niakatra teo anatrehan’ny mpitsara mpanao famotorana, ny alatsinainy teo tetsyAnosy ity asan-jiolahy ny herinandro lasa teo ity. Olona telo no voarohirohy tsy afa-bela tamin’izany, ary efa samy nidoboka am-ponja, ny harivan’io ihany. Anisan’izany ny vehivavy iray, 36 taona vao tera-bao, naiditra eny Antanimora. Mpiray tsikombakomba no sady mpamatsy fitaovam-piadina ireo jiolahy nanao ilay “opération” izy io. Fantatra fa efa voatana any am-ponja noho ny famatsiana fitaovam-piadiana (basy) amin’ny jiolahy koa ny vadin’izy io.Efa nandrasan’ny polisy tao an-tranony, eny Itaosy, ity renim-pianakaviana ity ka noraisim-potsiny tamin’ny fiverenany tao an-tranony, avy nitondra an-janany nanao vaksiny.Vola an-tapitrisany tao anaty kitapoIlay polisy tsy am-perinasa sy ny namany kosa, efa voasambotry ny polisy ny ny harivan’ilay fanafihana ihany. Tratra niaraka tamin’izy ireo tamin’izany ny fiara marika Peugeot 309 sy ireo vola antapitrisany maro tao anaty kitapo, niampy basy poleta efa nifahana bala miisa enina.Tsiahivina fa zandary sy lehilahy iray samy nanao fanamiana polisy no nanao ity fanafihana teny Anosipatrana ity. Maty voatifitry ny polisy teny akaikin’ny fasan’ny karana ilay zandary, taorian’ny fifanenjehana tamin’ny polisy. Ny harivan’iny ihany koa no nahasamborana ilay polisy efa voaroaka sy ireo namany roalahy, nandray anjara mivantanba tamin’ity fandrobana sy fanafihana goavana ity.Henintsoa Hani L’article Fandrobana volabe 36 tapitrisa Ar teny Anosipatrana: 2 lahy nidoboka eny Tsiafahy, vehivavy tera-bao nalefa eny Antanimora a été récupéré chez Newsmada.
Andraisoro: noraisim-potsiny tamin’ny kara-panondrony ireo jiolahy
Voasambotry ny polisy miasa ao amin’ny boriborintany fahatelo (CSP3) Antaninandro teny Andraisoro, ny alarobia 23 aogositra lasa teo ireo jiolahy raindahiny amin’ny fanendahana. Raha ny tatitra nampitain’ny lehiben’ny kaomisarian’ny CSP3, nisy vehivavy iray voaendaka teny Andraisoro, ny alin’ny alakamisy 8 aogositra lasa teo raha sendra nody alina. Niezaka nanohitra anefa ilay vehivavy ka na dia lasan’ilay jiolahy aza ny fananany dia voasintony koa ny kitapo kely teny am-baben’ity mpanendaka azy. Ny zoma 9 aogositra, tonga nametraka fitoriana teo anivon’ny CSP3 ilay vehivavy voaendaka ary natolony ireo polisy ilay kitapo azony tamin’ilay mpanendaka. Rehefa nosavaina ilay kitapo dia nahitana “portefeuille” iray ka hita tao anatiny ny kara-panondron’ilay mpanendaka. Nokarohina ilay jiolahy ka fantatra fa eny Andraisoro izy no monina. Nidina teny an-toeana ny polisy ka noraisim-potsiny izy sy ny jiolahy iray, ny alarobia teo. Niaiky ny heloka vitany izy roa lahy nanditra ny famotorana nataon’ny polisy.Jean ClaudeL’article Andraisoro: noraisim-potsiny tamin’ny kara-panondrony ireo jiolahy a été récupéré chez Newsmada.
Fisandohana andraikitra: lehilahy iray tratra nisoloky ho zandary
Tra-tehaky ny polisy tao Toamasina tamina hotely iray ao an-toerana ny lehilahy iray 24 taona. Voahorihory tamina resaka fisolokiana izy ary mbola milaza fa zandary miasa ao Moramanga koa. Araka ny angom-baovao, naka vola mitentina 2.500.000Ar taman’olona tany Anosibe an’Ala ilay lehilahy. Nilaza izy fa hanaovany fanadinana ho mpitsabo eto Antananarivo izany. Manana Moto rahateo izy ka nampanantenainy an’ilay olona nangalany vola izany. Mbola nilaza ilay mpisoloky fa lieutenant compagnie an’i Zandarimaria ao Moramanga. Ho porofon’izany ny fananany fanamiana « survête »-n’ny zandarimaria.Ankoatra izay, vehivavy iray hafa koa nakany vola 300.000Ar sy finday iray. Nampanantenainy moa ilay voasoloky fa alainy ho vady ary mbola nandaingany koa fa zandary ralehilahy. Vehivavy iray hafa koa nentiny nitsoaka tany Toamasina ary nohidiny 15 andro tao anaty chambre. « Novatsiny sakafo ilay vehivavy no mbola darohany sady tereny hanao firaisana ara-nofo aminy… », hoy ny fanazavan’ny polisy. Henintsoa Hani L’article Fisandohana andraikitra: lehilahy iray tratra nisoloky ho zandary a été récupéré chez Newsmada.
Fidinana tany atsimo: hovahana ny olan’ny kere
Nidina ifotony nijery ny dingana efa vita ny delegasionina notarihin’ny Praiministra Ntsay Christian, ny herinandro teo. Nanome toromarika ho an’ireo tompon’andraiki-panjakana sy ny solontena avy amin’ny sehatra tsy miankina ao Amboasary Atsimo ny tenany. “Tena ambony sy lehibe ny fanamby miandry antsika raha ny ady amin’ny kere aty atsimo”, hoy izy.Mbola hisy ny fotoana maharitra kokoa handinihana ny vahaolana entina amin’izany, hijerena ny lesoka, ny tokony hahitsy ary hitondrana ny vahaolana maharitra, hapetraka, na eo anivon’ny fitondrana foibe na ny aty an-toerana miatrika ny ady, araka ny nambarany.Araka izany, hapetraka ny « centre opérationnel de coordination », ho eo ambany fitarihan’ny minisiteran’ny Fiarovam-pirenena. “Hibaiko sy handrindra ny asa rehetra atao ao amin’ny distrikan’Amboasary izany ary hanana solontena ao anatin’izany ireo mpiara-miombona antoka sy ireo rantsa-mangaikan’ny fitondrana”, hoy ihany izy.Nanteriny fa laharam-pahamehana ny fiaraha-miasa, ny fahaiza-mitarika eo amin’ny fandrindrana ny asa ary ny tokony hanatevenana sy hanatsarana bebe kokoa ny fomba fiasa.Hisy koa ny fanaraha-maso akaiky ny fivoaran’ny toe-java-misy momba ny kere. Eo koa ny lamina manokana apetraka isaky ny kaominina momba ny fanisana ny mponina amin’ny fampitana ireo angom-baovao alefa any amin’ity foibe ao Amboasary ity.“Omena fitaovana sy tetibola mifanaraka amin’izay filany io ivontoerana io ary ezahina ny hametraka sampan’ity foibe ity isaky ny kaominina 18 mandrafitra ny distrika”, hoy izy.Synèse R. L’article Fidinana tany atsimo: hovahana ny olan’ny kere a été récupéré chez Newsmada.
« Toseke vonje aigne »: 70 000 ireo mpisitraka ao amin’ny faritra Androy sy Anosy
Efa manomboka ny fizarana ny vatsy vola “Toseke vonje aigne” ho an’ireo tokantrano marefo any amin’ny faritra Anosy sy Androy.Ny kaominina Amboasary sy i Ebelo, ho an’ny distrikan’Amboasary, ary ny kaominina Kopoky, ho an’ny distrikan’i Beloha, ny nanombohana izany ny faran’ny herinandro teo. 80 000 Ar isan-tokantrano isam-bolana mandritra ny dimy volana no raisin’ireo mpisitraka ny tohana. Velom-panantenana amin’ny fahatongavan’ity vatsy vola ity ireo ankohonana marefo voadona mafy noho ny haintany lalina satria misy vola hividianana sakafo, indrindra fa ho an’ny ankizy madinika. « Tsy misy ny vokatra noho ny haintany. Tsy mahita sakafo ka amin’ny antoandro, efa tsy mihinana ary zara raha mahita ny alina. Raketa mena no atao sakafo hitazonana aina kanefa ny raketa koa efa maina noho ny tsy fisian’ny rotsak’orana. Tena manampy ahafahanay mividy sakafo ny “Toseke vonje aigne” ka misaotra ny fanjakana malagasy”, hoy i Sambeirake, mpisitraka ao amin’ny toeram-pizarana Ankamena Tanantsoa, kaominina Amboasary Atsimo.Ny “Toseke vonje aigne”, izay fandaharanasan’ny fanjakana malagasy natokana ho an’ireo mpiara-belona marefo any atsimo ahafahan’izy ireo miatrika ny haintany sy hanarenan’izy ireo ihany koa ny fiainany ho amin’ny fampandrosoana. Ny minisiteran’ny Mponina sy ny fiahiana sosialy sy ny Fampivoarana ny vehivavy no mandrindra ny tetikasa miaraka amin’ny BNGRC. Voatendry hanatanteraka izany ny Fonds d’intervention pour le développement (Fid). Marefo 70 000 mahery ao amin’ny distrika enina ao amin’ny faritra Anosy sy Androy (Taolagnaro, Amboasary, Ambovombe, i Beloha, i Bekily, i Tsihombe) no vinavinaina hisitraka ity « Toseke vonje aigne » ity, vatsin’ny Banky iraisam-pirenena vola.Nisy ny fanentanana ireo mpisitraka amin’ny ady atao tsy hiparitahan’ny valanaretina Coronavirus. Voahaja avokoa ny fepetra ara-pahasalamana nandritra ny fizarana ny vatsy vola. Ankoatra ny vatsy vola, misy hatrany ny tantsoroka maro isan-karazany ahafahan’ireo mpisitraka manatsara ny fiainany.Vonjy A.L’article « Toseke vonje aigne »: 70 000 ireo mpisitraka ao amin’ny faritra Androy sy Anosy a été récupéré chez Newsmada.
Visite Technique inopinée : 939 véhicules sur les 4846 déclarés inaptes
Pour faire respecter la loi sur la circulation en matière de visite technique des automobiles dans le pays, la direction générale de la Sécurité routière (DGSR) a effectué une opération de contrôles inopinés des véhicules en circulation depuis le 18 janvier jusqu’au 22 janvier dernier. Les résultats de cette opération ont révélé que sur les 4846 véhicules contrôlés, 939 sont inaptes, c’est-à-dire ne doivent pas rouler. N’ayant pas passé de visite technique depuis des années, 157 ont été mis en fourrière. Il est également constaté que le nombre des voitures administratives qui se sont mises en règle en matière de visite technique a augmenté. Sur les 158 contrôlées, 103 sont en situation régulière. Puisque cette opération a également pour but la régularisation des véhicules d’immatriculation étrangère et ceux portant de plaque WW… , 201 sur les 353 véhicules d’immatriculation étrangère contrôlés ont réalisé la réception technique. En ce qui concerne les anomalies constatées, 210 véhicules ont dégagé de fumée excessive. Ils ont été pénalisés et interdits de rouler. Leurs papiers ont été retirés. La DGSR ne tolère jamais ce genre de défaillance technique qui pollue l’environnement. Ainsi, les propriétaires ont été ordonnés de réparer leurs véhicules pour pouvoir les utiliser de nouveau. Satisfaite de ces résultats, la DGSR compte poursuivre cette opération. T.M. L’article Visite Technique inopinée : 939 véhicules sur les 4846 déclarés inaptes est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Visite Technique inopinée : 939 véhicules sur les 4846 déclarés inaptes a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Raha mitovy ny fandaniana. Nitondra fanazavana momba tetikasa Optima izay ahitana ireo « tarif » efatra : ny tarif social, tarif économique, tarif confort ary ny tarif superconfort ny teo anivon’ny orinasa Jirama ny 20 janoary 2021. Nambaran’ny Tale jeneralin’ny Jirama, Andriamanga Vonjy fa betsaka tsy mahafantatra tsara momba ireo tarif teo aloha toy ny tarif 14, tarif 16,… ka mba hanamorana ny tolotra omen’ny Jirama no antony nanovàna izany. Ny tarif social dia natao ho an’ny mpanjifa mandany latsaky ny 100 kwh, ny tarif économique ho an’ny mpanjifa mandany latsaky ny 150 kwh, ny tarif confort ho an’ny mpanjifa mandany latsaky ny 300 kwh ary ny tarif superconfort ho an’ny mpanjifa mandany mihoatra ny 300 kwh. Nilaza ihany koa Andriamanga Vonjy fa ho fanarenana ny orinasa Jirama no tanjon’ity tetikasa ity. Araka ny fanampim-panazavana nomen’ny tale jeneraly lefitry ny Jirama fa ho fampitoviana tsikelikely ny vidin-jiro ho an’ny mpanjifa isam-paritra, ho fanamorana ny fampiasana ny tarif, noho Covid-19 dia nametraka tolotra vaovao hanampiana sokajin’olona marefo ary ho fampirindrana ny fandaniana satria sarobidy ny angovo no antony io tetikasa Optima io. Tombony amin’ity tetikasa ity ny fidinan’ny vidin-jiro hatramin’ny 15 % ho an’ny tarif social rehetra ary 6 ka hatramin’ny 26 % ho an’ny mpanjifa mandany latsaky ny 130 kwh isam-bolana. « Noho ny fampiharana ny Optima dia ny 80 % ny mpanjifa nahita fa nihena ny fandaniana raha mitovy ny fandaniana teo aloha. Ny 20 % izany hoe mpanjifa 70.000 kosa dia nahita fisondrotana teo amin’ny faktiora. Ny 91 % tamin’izy ireo nampiakatra ny fandaniany. Toro-hevitra ho azy ireo dia na mitsitsy na miova tarif », hoy hatrany ny tale jeneraly lefitry ny Jirama. Lynda A. Cet article JIRAMA : 80 % ny mpanjifa nahita fa nihena ny vidin-jirony vokatry ny tetikasa Optima est apparu en premier sur déliremadagascar.L’article JIRAMA : 80 % ny mpanjifa nahita fa nihena ny vidin-jirony vokatry ny tetikasa Optima a été récupéré chez Délire Madagascar.
Nalefa eny Tsiafahy ireo jiolahy enina namono karana
Naiditra avy hatrany eny amin’ny fonjaben’i Tsiafahy, omaly, rehefa avy natolotra ny fampanoavana ireo jiolahy miisa enina tompon’antoka tamina fanafihana narahina herisetra nahafatesana teratany karana iray teny Ankadimbahoaka. Ny polisy misahana ny heloka bevava, sakelika fahefatra (BC4) no nahasambotra ireto jiolahy ireto. Nahazo antso ny polisy nilaza fa misy trangana fanafihana eny Ankadimbahoaka tokony ho tamin’ny 8 ora alina, ny zoma lasa teo. Nidina teny an-toerana avy hatrany ny polisy nijery ny zava-misy. Vao nahatazana ireo polisy anefa ry zalahy dia lasa nandositra ka raikitra teo ny fifanenjehana. Toy ireny amin’ny horonantsarimihetsika ireny ny fifanenjehan’ny polisy sy ny jiolahy. Tsy nifarana izany raha tsy teny Ankorondrano, noraisim-potsiny ireo olon-dratsy. Miisa telo ireo jiolahy tao anatin’ilay fiara ary izy ireo indray no nanoro ny namany hafa, mipetraka eny Andranomahery ny iray raha teny Ankadimbahoaka kosa ny hafa. Fantatra nandritra ny famotoran’ny polisy fa mpiasa tao amin’ilay toerana notafihin’izy ireo ny mpiambina iray sy mpamilin’ilay kiarana. Izy ireo no atidohan’izao fanafihana izao, raha ny fanazavan’izy ireo tamin’ny polisy. Efa nigadra noho ny fanafihan-jiolahy ity mpamily ity. Tsiahivina fa hita faty nihosindra ny teratany karana iray teny Ankadimbahoaka ny herinandro teo.Jean ClaudeL’article Nalefa eny Tsiafahy ireo jiolahy enina namono karana a été récupéré chez Newsmada.
Mampiasa teknolojia avo lenta. Nitsidika ny ivon-toeran-tsarintany azo avy amin’ny zanabolana ampiharina indrindra ny tontolo ambanivohitra na « Center on Geoinformatics Applications in rural Development » (CGARD) eny Nanisana ny Ministry ny Fambolena sy ny Fiompiana ary ny Jono, Lucien RANARIVELO , ny 22 Janoary 2021. Ity ivon-toerana ity dia mikirakira ny sary azo avy amin’ny zanabolana ary miafara amin’ny famoahana saritany sy antotanisa momba ny famokarana eny amin’ny tontolo ambanivohitra. Efa nahavita nahavita tombana amin’ny fambolem-bary tamin’ny faritra fito ny CGARD , toy ny Vatovavy fito vinany, Vakinakaratra, Analamanga, amoron’i Mania, haute Matsiatra, Horombe ary Itasy. Eo ihany koa ireo lalana rehetra mifandray eny ambanivohitra misy ireo toeram-pambolena isan-karazany manerana an’i Madagasikara. Mpiara miasa akaiky amin’ny Ministeran’ny Fambolena sy ny Fiompiana ary ny jono ( MAEP) ny CGARD. 11.223 ha ny velaran’ny tanim-bary ao amin’ny faritr’itasy izay misy vary maniry raha ny vokatra nasehon’ity ivon-toerana ity tamin’ity volana Janoary 2021 ity. Voka-bary « Marina fa sahirana noho ny tsy fahampian’ny rotsak’orana ny tantsaha fa amin’ny volana Martsa 2021 kosa vao ho hita na hitombo na hilatsaka ny voka-bary eto amintsika satria ao anatin’ny fanetsana ny tantsaha amin’izao fotoana izao hatramin’ny 15 Febroary 2021 », hoy ny ministra, Lucien RANARIVELO. Noho izany dia tsy mbola azo andrefesana fa hisy fahasahiranana ara-bary amin’ity taona ity na hita aza fa miakatra ny vidim-bary avy eto an-toerana, hoy izy. Ny afovoan-tany amin’ny ilany atsinanana no tena voa mafy amin’ny tsy fisian’ny rano raha ny nambarany fa ny ilany andrefana, itasy, bongolava, betafo, mandoto dia mandeha tsara ny fambolem-bary. Ankoatra izay dia mandeha tsara ny fambolem-bary, toy ny any Menabe izay efa manomboka niakatra ny voka-bary, toy ny lemak’i Taheza, ikililaoka, mangoky. Faritra alaotra no haraha-maso akaiky satria 10 isan-jato ny famatsiana vary manerana an’i Madagasikara ny vokatra mivoaka avy ao. Izao volana Janoary izao vao manao taniketsa iny faritra iny. Fanantenana hoy ny ministra ny hisian’ny rotsakorana. Nanapa-kevitra ihany koa ny ministera fa isaky ny faritra rehetra, kaominia, distrika mamoka-bary dia hisy ny fakana ny vidim-bary eny an-tsena isan-kerinandro. Hisian’ny mangarahara na ho an’ny mpanjifa na ny mpandraharaha mba hanana antotam-baovao ara-potoana sy marina izy ireo. Indrindra ny mba hampitoniana ny ahiahy fa ho sahirana ara-bary isika malagasy. Tsy maintsy tratra ny fahaleovan-tena ara-bary ao anatin’izao fotoam-piasan’ny prezidàn’ny repoblika izao hoy ny ministra. Eo ny fanitarana ny velaran-tany na ny fambolena an-tanety na anaty rano. Hampiasa masomboly tsara, mamokatra avo roa heny. Manampy tosika ireo mpamokatra amin’ny alalan’ny « fond de développement agricole » izay vao nahazo vola tamin’ny heritaona avy any amin’ny vondrona eropeanina. Hiarahana miasa amin’ny tranoben’ny tantsaha izany. Eo ihany koa ny fandrosoan’ny tetikasa Bas mangoky iarahan’ny fanjakana amin’ny mpampiasa vola izay hanomboka amin’ity taona ity. Nirina R. Cet article CGARD : Manampy amin’ny fanapahan-kevitra raisina amin’ny sehatry ny fambolena est apparu en premier sur déliremadagascar.L’article CGARD : Manampy amin’ny fanapahan-kevitra raisina amin’ny sehatry ny fambolena a été récupéré chez Délire Madagascar.